Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Haiti » Ngalaba steeti US na-agba ndị America ume ịhapụ Haiti ugbu a
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Haiti • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ngalaba steeti US na-agba ndị America ume ịhapụ Haiti ugbu a.
Ụmụ amaala America niile kwesịrị iji nlezianya tụlee ihe ize ndụ dị n'ime njem ma ọ bụ ịnọgide na Haiti n'ihi ọnọdụ nchekwa dị ugbu a na ihe ịma aka akụrụngwa, Ngalaba Steeti US dọrọ aka ná ntị.
Ịdọ aka na ntị na Ngalaba Steeti US na-abịa n'oge ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akawanye njọ na mba Caribbean nwere nsogbu.
Dị ka MSF si kwuo, ụlọ ọgwụ ya na ụlọ mberede ga-agwụcha mmanụ maka igwe na-emepụta ọkụ n'ime izu atọ ma ọ bụ ihe na-erughị ya.
Ụlọ ọrụ nnọchite anya US agaghị enwe ike inyere ụmụ amaala US nọ na Haiti aka ịpụ ma ọ bụrụ na nhọrọ azụmahịa adịghị.
The Ngalaba Ọchịchị United States dọrọ ụmụ amaala US aka na ntị Haiti na "ụkọ mmanụ ọkụ zuru oke nwere ike igbochi ọrụ ndị dị mkpa na mberede, gụnyere ịnweta ụlọ akụ, ịnyefe ego, nlekọta ahụike ngwa ngwa, ịntanetị na nkwukọrịta, na nhọrọ njem ọha na nke onwe," na-agba ndị America niile ume ịhapụ mba Caribbean nwere nsogbu ozugbo enwere ike. .
Ụmụ amaala America niile "kwesịrị iji nlezianya tụlee ihe egwu dị n'ime njem ma ọ bụ ịbanye na ya Haiti n'ihi ọnọdụ nchekwa dị ugbu a na ihe ịma aka akụrụngwa", nke Ngalaba US State kwuru na nkwupụta.
"Ụlọ ọrụ nnọchi anya US agaghị enwe ike inyere ụmụ amaala US nọ na Haiti aka ịpụ ma ọ bụrụ na nhọrọ azụmahịa adịghị."
O dochaghị anya ụmụ amaala US ole bi ugbu a Haiti, mana ịdọ aka ná ntị a na-adịghị ahụkebe sitere na Ngalaba Ọchịchị na-abịa n'etiti ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-arịwanye elu na ụkọ mmanụ ọkụ nke emetụtala ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọrụ azụmahịa, dịka gọọmenti Haiti na ndị uweojii na-agbasi mbọ ike ịchịkwa òtù ndị gbochiri ọdụ ụgbọ mmiri nkesa mmanụ ruo ọtụtụ izu.
Dabere na ndị dọkịta na-enweghị oke (Medecins Sans Frontieres, ma ọ bụ MSF), ụlọ ọgwụ ya na ebe ihe mberede ga-agwụ mmanụ maka igwe ọkụ n'ime izu atọ ma ọ bụ obere ma ọ bụrụ na akụrụngwa ọhụrụ abịaghị.
Ụkọ mmanụ ụgbọala ahụ emebiwokwa mmiri mmiri Haiti, nke dabere na igwe ọkụ.
Ọnọdụ a emewokwa ka ọnụ ahịa nri rịa elu n'obodo nwere ihe karịrị nde mmadụ 11 ebe ihe karịrị pasenti iri isii na-akpata ihe na-erughị $60 kwa ụbọchị.
The Ngalaba US State ịdọ aka ná ntị na-abịakwa dị ka otu ndị ozi ala ọzọ Ndị Kraịst 17 bụ ndị a tọọrọ n'ọnwa gara aga, gụnyere ụmụ amaala US 16, ka ka nọ n'agha.